【IKHOWUDI GENSHIN IMPACT 】 Ihlaziywe NAMHLANJE ▷ kaJulayi 2022
Claymores kunye neMandobles
Iikhowudi Genshin Impact
Molo uMenzi! Kuba ukhangela i iikhowudi zemivuzo kwaye kungekudala amagugu angene Genshin Impact Apha ndiza kukushiya uluhlu oluhluke kakhulu kwezi, khumbula ukuba ezinye zinokuphelelwa, zikhulule ngokukhawuleza kwaye ezinye zivumelekile ngokuxhomekeke kummandla, ndincoma ukuba uzame zonke, kuba siqinisekile ukuba i-80% yale nto. uluhlu lweekhowudi Zihlala Lusebenza . Ungalibali ukuba uyabona izikhokelo, Imephu yokusebenzisana, izinto, ngamacangci, armas, abalinganiswa, iintshaba, mishini, ubugcisa bezinto zakudala, curiosities kunye nokunye malunga genshin impact kwiwebhu
Uluhlu lweekhowudi ezisebenzayo ze Genshin Impact
GENSHINISIFUNDO: 50 iiProtogems simahla kunye 3 hero wits.
I-SBNBUK67M37Z: IiProtogem ezingama-30 kunye nezinto ezi-5 zasimahla ze-EXP (ezisebenzayo kuphela kubadlali abatsha kanye).
I-MS7C3SV8DMZH: IiProtogem ezingama-60 zasimahla kunye namava ama-5 we-Adventurer (ikhowudi efunyenwe ngoMatshi 29, isasebenza).
AB7CKBVQULE5: Ufumana i-100 yeeProtogem zasimahla kunye ne-10 ye-mystical refinement minerals (esebenzayo kuphela kude kube yi-19 kaMatshi).
LBNDKG8XDTND: Ufumana iiProtogem ezili-100 zasimahla kunye ne-ore eyi-mystical refinement ore (isebenza kude kube ngo-Okthobha 10, 4)genshinI-1006u - ufumana iiprotogem ezingama-30 + i-15 yasimahla ye-Adventure EXP (isebenza kuphela eYurophu).
genshin1006a -Ufumana iiprotogem ezingama-30 + i-15 ye-Adventure EXP simahla (isebenza kuphela eMelika).
genshin1006s – Ufumana 30 IiProtogem + 15 Adventure EXP simahla (isebenza kuphela Asia).
GenshinMHY0O – ufumana 30 protogems simahla (esebenzayo kuphela eYurophu).
GenshinMHY0M -Ufumana iiprotogem ezingama-30 simahla (zisebenza kuphela eMelika).
GenshinMHY0I -Ufumana iiprotogem ezingama-30 simahla (zisebenza kuphela eAsia).
GENSHINMHY0O -Ufumana iiprotogem ezingama-30 simahla (zisebenza kuphela kwiPC nakwiselfowuni).
GenshinZHB30 – ufumana 160 protogems simahla.
Genshin0928N -Ufumana iiprotogem ezingama-60 kunye namaqunube angama-10.000 simahla (esebenzayo kwiiseva zaseMelika kuphela).
Genshin0928E -Ufumana iiprotogem ezingama-60 kunye namaqunube angama-10.000 simahla (esebenzayo kuphela kwiiseva zaseYurophu).
Genshin0928A -Ufumana iiprotogem ezingama-60 kunye namaqunube angama-10.000 simahla (esebenzayo kwiiseva zaseAsia kuphela).
GENSHIN1111 -ufumana iiprotogem ezingama-60 kunye namaqunube angama-10.000 simahla (avumelekile kuye wonke umntu).
GENSHINISIFUNDO -Ufumana iiprotogem ezingama-50 kunye nezinto ezi-5 zamava kubalinganiswa bakho simahla.
GENSHIN1006A -Ufumana iiprotogem ezingama-30 kunye neepakethi zamava ezi-5 simahla (zisebenza kuphela kwiiseva eMelika).
GENSHIN1006U -Ufumana iiprotogem ezingama-30 kunye neepakethe zamava ezi-5 simahla (zisebenza kuphela kwiiseva zaseYurophu).
GENSHIN1006S -Ufumana iiprotogem ezingama-30 kunye neepakethe zamava ezi-5 simahla (ezisebenzayo kwiiseva zaseAsia kuphela).
IGOLNXLAKC58 -Ufumana iiprotogem ezingama-50 simahla (zisebenza kude kube nge-30 kaNovemba, kuyo yonke imimandla kunye nezixhobo).
eATDgIXLD56 -ufumana iiprotogem ezingama-100 kunye namaqunube angama-50.000 simahla (avumelekile kuye wonke umntu).
nBEm3myAL2b -ufumana iiprotogem ezingama-100 kunye namaqunube angama-50.000 simahla (avumelekile kuye wonke umntu).
G3tQq6TOqmE -ufumana iiprotogem ezingama-100 kunye namaqunube angama-50.000 simahla (avumelekile kuye wonke umntu).
5KVeIbSxDUU -Ufumana iiProtogem ezili-100 kunye ne-10 Mystic Boost Minerals simahla (esebenzayo kumntu wonke).
Ndivuyile -Ufumana iiProtogem ezili-100, iiminerali ezili-10 zasimahla zokuqinisa imfihlakalo (ezisebenzayo kumntu wonke).
153YUSAENH -Ufumana iiProtogem ezingama-30 kunye nezinto ezi-5 zamava e-Adventure simahla (esebenzayo kumntu wonke).
dU2mhjQL1ZT -Ufumana iiprotogem ezili-100 kunye nezinto ezi-5 zasimahla ze-EXP (ezisebenzayo kumntu wonke).
GSIMPTQ125 -Ufumana iiProtogem ezili-140, amaqunube angama-10.000, izinto ezi-5 ze-EXP ze-Adventurer, kunye nezinto ezi-3 zeQhawe loBukrelekrele.
153YUSAENH -Ufumana iiProtogem ezili-140, amaqunube angama-10.000, izinto ezi-5 ze-EXP ze-Adventurer, kunye nezinto ezi-3 zeQhawe loBukrelekrele.
GENSHINISIFUNDO -Ufumana iiProtogem ezili-140, amaqunube angama-10.000, izinto ezi-5 ze-EXP ze-Adventurer, kunye nezinto ezi-3 zeQhawe loBukrelekrele.
GENSHINISIFUNDO -IiProtogem ezingama-50 kunye ne-3 yamaqhawe asimahla.
GSIMPTQ125 – 60 Protogems kunye 10.000 amaqunube simahla.
153YUSAENH -IiProtogem ezingama-30 kunye namava ama-5 e-Adventure simahla.
KWINKQWWW922M -IiProtogem ezili-100 kunye nezixhobo ezili-10 zasimahla zokucokisa.
ET7ADQFF8KJR – 100 Protogems kunye 5 free Hero Ingenuity.
PSNTC8FEQK4D – 100 Protogems kunye 50.000 free Mora.
I-GS6ACJ775KNV – 60 Protogems kunye 10.000 free Blackberries.
Ukuxhobisa – 60 iiProtogem simahla.
IINKCUKACHA – 100 IiProtogem zasimahla kunye namaqunube angama-50.000.
CBNXRD6S7H3N -I-100 yeeProtogemas zamahhala kunye ne-50.000 amajikijolo (isebenza kuphela kwingingqi yaseChina).
4BNSD3675J8D -IiProtogem ezili-100 zasimahla kunye ne-5 hero wits.
EBPWQU6SNZ22 -I-100 yeeProtogem zasimahla kunye ne-5 hero wits (isebenza kuphela kwingingqi yaseTshayina).
FS6SU367M279 -IiProtogem ezili-100 zasimahla kunye nezixhobo ezili-10 zokucokisa.
2T7E9CPA7YJE – IiProtogem ezili-100 zasimahla kunye nezinto ezili-10 zokucokisa (zisebenza kuphela kummandla waseTshayina).
WTNTBYSZJNRD: 100 IiProtogem zasimahla kunye nokusulungekiswa kwentsimbi x10.
8A6ABTH2N9Z: 100 free Protogems kunye hero wit x5.
UTNBBGSZ3NQM: IiProtogem ezingama-100 zasimahla kunye namaqunube angama-50.000.
© 2022 Iikhowudi Genshin · Onke amalungelo agciniwe